औषधिबाट गरिने गर्भपतन कति सुरक्षित ? « Kakharaa
१ फागुन, काठमाडौं । सन्तानको रहर पुगिसकेपछि पनि गर्भ रहन सक्छ । बेलाबखत अप्रत्यासित गर्भ रहन्छ । यसरी अनिच्छित गर्भ रहेमा के गर्ने ? यसमा एउटै विकल्प बाँकी रहन्छ, गर्भपतन गर्ने ।
निश्चित अवधीका गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । गर्भपतनका लागि केही विधि प्रचलित छन् । अहिले औषधि सेवनबाट समेत गर्भपतन गराउन सकिन्छ । तर, यसमा केही सर्तकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । गर्भपतन सेवाका लागि कानुनी मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । गर्भपतन सेवा दिने संस्था र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी दुवै सुचिकृत हुनु पर्छ । गर्भपतन सेवाका लागि सुचिकृत भएका वा मान्यता प्राप्त गरेका संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको लोगो राखिएको हुन्छ ।
यी औषधीहरुको प्रयोगले ९ हप्ता अर्थात ६३ दिन सम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । नेपालका सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोग गरिएका औषधि करिब ९६ प्रतिशत प्रभाकारी भएको साबित भएको छ । त्यसैले गाउँ–गाउँ सम्म यो सेवा बिस्तार गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ र सोहि लक्ष्य अनुरुप स्वास्थ्य चौकी सम्म यो सेवा बढाईएको छ ।
यी दुवै अवस्था तथा तथ्यलाई पहिचान गर्न नसक्ने जो कोहि व्यक्तिबाट वा गर्भको स्थितीलाई परिक्षण नगरी एम।ए। अर्थात मेडिकल एर्बोसन (औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन) गर्नु खतरनाक पनि हुन सक्छ । यस बाहेक गर्भपतनका लागि अन्य धेरै कुरामा बिचार पुर्‍याउनु पर्छ । पहिलेको गर्भ तथा प्रसुति सम्बन्धि समस्याहरु, अन्य दिर्धरोगहरु, बिभिन्न स्वास्स्थ्य समस्याका लागि औषधिहरु सेवन गरिरहेको अवस्था आदिका बारेमा पनि जानकारी लिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय यस्ता अवस्थामा औषधिको प्रयोग गर्नु हुदैन ।